Knowledge Sharing and Advertising – 1 – NETPRO GPS Solutions
Eco Driving / Driver Behavior
Smart Lock / E-Lock
Fuel Monitoring for Ground Tank
Light Vehicles with CANBus
ယနေ့တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် မိမိတို့ရဲလုပ်ငန်းတွေကို Information Technology နည်းပညာများနဲ့ပေါင်းစက်ပီးလုပ်ခဲ့ရင် အကျိုးရှိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်….နေရာတိုင်းမှာ မြင်နေ ကြားနေရတာတွေကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ရင် ဆုံးရှုံးမှုတွေက အနည်းနဲ့အများတွေ့နေရတာပဲ…ဆုံးရှုံးမှုတော်တော်များများက နည်းပညာသုံးလိုက်ရင်ကာလို့ရနိင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ အများကြီးရှိပါတယ်…..
ဘယ်လိုနည်းပညာတွေက ကိုယ့်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်း မှာ တွဲဆက်ပီးသုံးလို့ရလည်းဆိုတာကို သိဘို့ပါပဲ… ကိုယ်သိရင်လည်း တခြားလူတွေကို ကြုံကြိုက်တဲ့အခါ ဒီလို နည်းပညာ တွေရှိတယ်ဆိုတာ ဝေမျှ့လိုက်ကြရအောင်ဗျာ….
Tractors , Harvesters တွေမှာ Netpro GPS စနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက် ရင်စက်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားစရာမလိုဘဲ အဝေးကနေ အော က်ပါအချက်တွေသိနိုင်သွားမယ်…… နည်းပညာတွေအရမ်းကောင်းနေပါပီ ယနေ့ခေတ်မှာတော့
👉စက်နှိုးနေလား၊ ပိတ်ထားလား သိနိုင်သွားမယ်…..
👉 သော့လှဲထားလား၊ ပိတ်နေလား သိနိုင်မယ်…..
(Ignition Key On/Off)
👉 စက်နှိုးပီး အချိန်ဖြုန်းနေတာလား သိနိုင်သွားမယ်…
👉 တနေ့တာ အလုပ်လုပ်ချိန်ကိုသိနိုင်သွားမယ်…..
👉စက်နာရီ ဘယ်လောက်ရောက်နေလဲ ဆိုတာ အတိအကျ သိနိုင်သွားမယ် ….. (Engine Hour)
👉ဆီတိုင်ကီထဲမှာ ဆီ ဘယ်လောက်ကျန်နေသေးလဲ အတိအကျ သိနိုင်မယ်. (အသွင်းသိမယ်/ အထုတ်သိမယ်) ….. (Fuel Level)
👉စက်ကို ပေးမသုံးစေချင်ရင် အဝေးကနေ လှမ်းပိတ်ထားလို့ရသွားနိုင်မယ်…. ( Engine Blocking)
👉စက် တစ်စီးထဲကို Operator များများနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ မောင်းလဲ ခွဲခြားသိနိုင်အောင် RFID Card စနစ်တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ပီး သိနိုင်မယ်….ပေးမမောင်းစေချင်ရင် အဝေးကနေ Card စနစ်ကို ပိတ်လို့ရနိုင်မယ်….
အဓိကအချက်မေ့တော့မလို့…. လယ်ယာသုံး ဦးဦး၊ဒေါ်ဒေါ် ၊ ကိုကို၊ မမ များအတွက် အရေးတကြီး သိနိုင်မယ် အချက်တချက်ရှိပါသေးတယ်…. ဘာလဲဆိုတော့ ….
👉ထွန်ယက်ခဲ့တဲ့ ဧက, ရိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ ဧက တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီသိနိုင်သွားပါမယ်….. တနေ့တာ ဧက ဘယ်လောက် ထွန်ယက် ရိတ်သိမ်းခဲ့တာတွေကို… လုပ်ကွက်ထဲ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပီး စက်ရှိတဲ့နေရာကို သွားစရာမလိုဘဲ အိမ်ကနေ GPS စနစ်ကို အသုံးပြုပီး တိုင်းတာလို့ရနိုင်သွားပါမယ်…..
👌လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသုံး စက်တွေဝယ်မည့်သူများအတွက် အခုလို့ အချက်လေးတွေပါ၊မပါ မေးမြန်းပီးမှ ဝယ်လိုက်ပါ…
👌ရောင်းချမယ့်သူများကလည်း အခုလို စနစ်တွေ တပ်ဆင်ပီး …… တစ်ပါတည်းရောင်းချမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စက်တွေလည်း အရောင်းသွက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ……
မိမိတို့လုပ်ငန်းများအတွက်သင့်တော်ပီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် အခုပဲ ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုက်ပါ။
NETPRO GPS Solutions50,717 Likes
We enable companies to reduce costs, save time and improve their efficiency with our innovative GPS Tracking Solutions.
NETPRO MYANMAR Co., Ltd was founded on September 9, 2013 by Mr.Aung Myo graduated from University of Computer Studies, Yangon with B.C.Tech. In earlier 2006, before he founded the NETPRO MYANMAR, he was an IT certified trainer such as CompTIA, Microsoft, Cisco, Juniper and Mikrotik.Read more
+95 9444483511, +95 9444483522
+95 9444483533, +95 9444483544
NETPRO GPS Solutions Directory
© Copyright - NETPRO GPS Solutions | Fleet Management Systems, Fuel Monitoring Systems
Heavy Machinery များအတွက် Telematics System ကနေရနိုင်မယ့်... netpro gps solutions gps_knowledge_sharing_p2 | NETPRO GPS Solutions Knowledge Sharing and Advertising – 2